နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 နိုဝင်ဘာလ 23, 2020 Tarun ဘ‌‌လော့ခ်, အသားပေးသတင်းများ
ဆောင်းရာသီသည်အားလပ်ရက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်းအိမ်များကိုထိထိရောက်ရောက်မနွေးလျှင်ပျော်စရာမှာပျက်စီးနိုင်သည်။ အအေးမိတဲ့အခါနောက်ဆုံးမိနစ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကသင်ဟာအလျင်စလိုနဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့အသုံးစရိတ်များနဲ့ကြီးမားတဲ့အသုံးစရိတ်များကိုသာရရှိမှာပါ။ ဒီနောက်ဆုံးမိနစ်အခက်အခဲတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဒီဆောင်းရာသီမှာသင့်အိမ်တွေကိုနွေးထွေးစေမယ့်လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုထားတယ်။
နွေရာသီရာသီတွင်လေညှင်းများသည်ကုလားကာဖြင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းနေစဉ်ဆောင်းရာသီတွင်အလွန်အမင်းအအေးမိခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထူထဲသောကုလားကာများသို့ပြောင်းခြင်းသည်နေအိမ်များအတွင်း၌ကြာရှည်စွာအပူရှိန်ကိုသေချာစေပါလိမ့်မည်။ ထပ်ဆောင်းအပူကာကွယ်မှုကိုသေချာစေရန်ထူထပ်သောကုလားကာများကိုပြတင်းပေါက်များသာမကတံခါးများပေါ်တွင်အသုံးပြုပါ။
ကုလားကာအထူများကိုသုံးခြင်းအပြင်ညအချိန်တွင်ပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်ထားပြီးနေရောင်ခြည်တွင်ဖွင့်ထားပါ။ နေကိုယ်တိုင်ထက် ပို၍ ကောင်းသောအပူပေးစက်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်! ထို့ကြောင့်နေ့အချိန်၌သင်၏နေအိမ်များအတွင်းပူနွေးသောဆောင်းရာသီနေရောင်ခြည်ကိုသေချာစေပါ။
ဆောင်းတွင်းခြေအိတ်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အပြင်သင့်အိမ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်ကြမ်းပြင်များကိုကော်ဇောများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။
ဆောင်းတွင်းခြေအိတ်များ ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းအပြင်သင်၏ကြမ်းပြင်ကိုထူထပ်သောကော်ဇောများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။ ကော်ဇောများနှင့်ကော်ဇောများသည်သင့်အိမ်၏အပူကိုပိတ်မိစေပြီးနွေးထွေးသောနွေးထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ သင်ကြမ်းပြင်များကိုကာရံပြီးနောက်သင့်အိမ်၏အပူထိန်းထားမှုနှင့်ကွာခြားချက်ကိုသင်ချက်ချင်းခံစားမိလိမ့်မည်။ ဆောင်းရာသီတွင်အပူအအေးများသည့်အဓိကအရင်းအမြစ်များမှာ insulator တွင်လည်းမပါ ၀ င်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကြမ်းပြင်များကိုဖုံးအုပ်ထားပါ။
အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ရုံသာမကအမြင့်ဆုံးအသုံး ၀ င်မှုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသောအပူပေးစက်သည်ဆောင်းရာသီအတွက်အမြင့်ဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအပူထိန်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် EcoHeat။ ဒီစက်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ရုံသာမကအိတ်ဆောင်လည်းဖြစ်သည် ၎င်းသည်အလိုအလျောက် shut-off လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါရှိပြီး၎င်းကိုကျော်ဖြတ်သောအခါဖုန်းကိုဆက်လက်မပိတ်ထားရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်စတင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားခြင်းတို့ကြောင့်သင်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်ပတ်ရန်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်သေချာစေသည်။
သင်၏မီးခိုးခေါင်းတိုင်များ၏ကြီးမားသောပါးပျဉ်းသည်ဆောင်းတွင်းလေထဲဝင်လာရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးမပြုသည့်အခါလေအေးအေးကိုဖြတ်သန်းရန်သင်၏မီးခိုးခေါင်းတိုင်များဖုံးအုပ်ထားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မီးခိုးခေါင်းတိုင်သို့မဟုတ်မီးဖိုကိုကြာမြင့်စွာအသုံးပြုရန်မသွားလျှင်၊ မီးခိုးငွေ့သို့မဟုတ်မီးဖို၏အဆုံးသည်သင်၏နေအိမ်များ၏ပူနွေးသောလေကိုစုပ်ယူနိုင်သည်၊ ဆောင်းရာသီအတွင်းအပူဆုံးရှုံးမှုကိုတိုးစေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏နေအိမ်များတွင်ဖွင့်ထားသောမူကြမ်းများကိုသေချာစွာသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
သင်၏အိမ်အပြင်ဘက်ရှိအုတ်ခဲများအက်ကြောင်းများရှိပါကလေအေးသည်အတွင်းပိုင်းကိုအလွယ်တကူစိမ့်ဝင်နိုင်သည်။ သင်သည်အကူအညီကိုငှားရမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ အက်ကြောင်းများကိုဖျန်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏နေအိမ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီးအိမ်ကိုပိုမိုပူနွေးစေလိမ့်မည်။
ဆောင်းတွင်းရာသီသည်သင်၏ရေပိုက်များအတွက်လည်းမလွယ်ကူပါ။ ပိုက်များအေးခဲ။ အိမ်တွင်ရေမရှိသောအခါပြနာများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယင်းကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာအပူကိုအေးခဲမသွားခင်ပိုက်များကိုသီးခြားထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ရေပိုက်များကိုအပူကြိုးများနှင့်အပူတိပ်များတပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်မတတ်နိုင်ပါကသင်၏ပိုက်များကိုကာရံရန်သတင်းစာများကိုသုံးနိုင်သည်။
7. သင်၏ကားဂိုဒေါင် / ထပ်ခိုး / အပိုအခန်းများကို insulate
သင်၏နေအိမ်များ၏အပူထိန်းထားမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အပိုအခန်းများ၊ ကားဂိုဒေါင်၊ ထပ်ခိုးသို့မဟုတ်အခြားအလားအလာရှိသောအဖွင့်အအေးခန်းများကိုသေချာစွာသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ဤနေရာများသည်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းလေအေးရန်အဓိကဝင်ပေါက်အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရှိပြီးသားဘောင်များအတွင်းအပိုတေးထားခြင်း (သို့) အလွှာများထပ်ထည့်ခြင်းကသင်၏အိမ်များကိုယခုဆောင်းရာသီတွင် ပို၍ နွေးထွေးစေသည်။
ပြတင်းပေါက်များအတွင်းလျှပ်ကာထည့်သွင်းခြင်းသည်အိမ်များအတွင်း၌အဓိကအပူကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အကယ်၍ ပြတင်းပေါက်ကိုနှစ်ဆမှန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အကုန်အကျများသောကိစ္စဖြစ်ပါကပြတင်းပေါက်များကိုဖုံးအုပ်ရန်ပလပ်စတစ်အလွှာတစ်ခုကိုသင်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ သင်၏ပြတင်းပေါက်၏အတွင်းပိုင်းရှိဤအထူးရုပ်ရှင်သည် ထပ်မံ၍ အပူချိန်ကိုကာကွယ်ပေးသောကြောင့်အေးခဲနေသောလေကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။
၉။ လေစစ်စက်များကိုသန့်ရှင်းစွာ / ပိတ်ဆို့ထားပါ
သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ HVAC စနစ်ပုံမှန်လေဝင်လေထွက်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ ပရိဘောဂများနှင့်အဝတ်လျှော်ခြင်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သင်၏ HVAC စနစ်အားပိုမိုအားကောင်းစေပြီးယင်းက၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လေထွက်ပေါက်များအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်လေကိုစီးဆင်းစေရန်သေချာစေပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင့်အိမ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့နံရံတစ်လျှောက်စောင်ကိုချိတ်ထားခြင်းပဲ။ ဤနည်းသည်သင်၏အိမ်အတွင်းရှိအပူကိုပိတ်မိစေပြီးပိုမိုနွေးထွေးစေသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်စဉ်သင်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အများပိုင်သတင်း အပူ နေအိမ် သီးခြားထားခြင်း နွေးထွေးသောနေအိမ်များ ဆောင်းရာသီ
Tarun သည်ယခင်က Semi- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊